Ronaldo Nazario Muxuu Maantoo Kale Ku Xasuustaa Oo 20-Sano Ku Buuxdo Maanta? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Maalintii murugada ee wiiqday xirfadda halyeyga reer Brazil ee Ronaldo, waxa laga joogaa 20 sannadood oo buuxa, xilligaas oo uu haleelay dhaawac xun oo uu ku maqnaa muddo laba sannadood ku dhow isla markaana yareeyey awooddiisii iyo tayadiisii ciyaareed.
April 12, 2020 waxa weeraryahanka reer Brazil lagu soo bilaabay ciyaar ahayd finalka Coppa Italia oo ay iskaga hor yimaaddeen Inter Milan iyo Lazio, xilli uu kasoo laabtay dhaawac hore oo uu muddo ku maqnaa.
Xiddigan oo saadaal badan iyo falanqayn weyn laga sii bixiyey qaab ciyaareedka uu kula soo laaban doono ciyaartaas iyo waxa uu kooxdiisa kusoo kordhin doono, waxa shaashadaha dunida oo dhan lagala socday ciyaartaas iyo wacdaraha Ronaldo, laakiin garoonka ayaa laga dhex-qaaday isaga oo ooyaya, waxaana indhihiisa ka da’aysay ilmo aan xad lahayn, taas oo keentay in jamaahiirta Inter Milan iyo kuwa kale ee taageeri jiray Ronaldo, kaddib markii uu ka jabay jilibka.
Dhaawacan jibniinka ah ee dambe, waxa uu ahaa isla halkii uu bishii November ee 1999-kii ka jabay, waana sababta keentay, waana sababta sii kordhisay murugada.
Gerard Saillant ayaa qalliin ku sameeyey Ronaldo, waxaanu hadda dib u xasuustay sidii ay xaaladdu ahayd maalintaas, waxaanu yidhi: “Mucjisooyin may jirin. Wuxuu u baahnaa ugu yaraan siddeed bilood oo uu kusoo kabto ka hor inta aanu ciyaaraha kusoo laabanin, mana aanan hubin in xattaa uu mar kale awoodi doono inuu ciyaaro.”
Ronaldo ayaa isagana lala xidhiidhay, waxaanu sheegay inay waqti adag u ahayd, laakiin qoyskiisa, dhakhtarkiisa iyo tababareyaasha jidh-dhisku ay caawiyeen.
Inyar kaddib waqtigaas waxa uu noqday aabbo, taasina waxay sii siisay dhiirigelin ah inuu soo kaban karo.
“Qoyskayga, dhakhtarka iyo tababaraha ayaa i dhiirigeliyey. Isla waqtigaas waxaan noqday aabbo waxaanay taasi ii ahayd dhiirigelin muhiim ah. Dhalashada wiilkayga Ronaldo ayaa isiisay awooddii aan u baahnaa si aan uga soo kabto jabniinka.” Ayuu yidhi.
Isaga oo aan mar dambe garoon lagu arag oo u jiifa dhaawacii haleelay April 12, 2000 ayuu Ronaldo isku diyaariyey inuu ka qayb-galo Koobkii Adduunka 2002 lagu qabtay South Korea iyo Japan, waxaanu dalkiisa u qaaday koobkaas.
“Laba sannadood iyo bahd ayaan ka shaqaynayay inaan soo kabto, Allah ayaana maalintan ii dhigtay iyo xulka qaranka Brazil.”
Markii uu kasoo laabtay Koobka Adduunka, Ronaldo dib uguma laabanin Talyaaniga, waxaanu ku biiray Real Madrid.